Momba anay - Chengdu Mengsheng Electronics Co., Ltd.
Chengdu Mengsheng Electronics Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2006. Mahafeno ny filan'ny fampandrosoana ny tsena, mamolavola drafitra ara-barotra mba hanomezana mpanjifa vokatra azo itokisana sy tsy lafo ary serivisy avo lenta, ny orinasa dia manome EMI famatsiana herinaratra sivana sivana sy fitsapana EMC. ary serivisy vahaolana taorian'ny taona maro nanaovana ny fampandrosoana.
Manome vahaolana feno momba ny fifanarahana elektromagnetika (EMC) sy ny fanatanterahana ny tetikasa izahay, ary mamatsy andiana vokatra sivana tariby herinaratra toy ny sivana EMI, fanafoanana ny vondron'olona, ​​ary ny fanafoanana ny fisondrotana.Ny sivana EMI dia misy sivana herinaratra amin'ny ambaratonga miaramila / indostrialy AC, sivana herinaratra telo-dingana AC, ary sivana herinaratra DC.Ny ankamaroan'ny vokatra dia nandalo CUL, CE, CQC, ROHS fanamarinana.Afaka manome sivana herinaratra 0.5A-1000A isan-karazany ao anatin'ny 2-4 herinandro, manome EMC mialoha fitsapana sy fanohanana ara-teknika, ary manome ho an'ny mpanjifa amin'ny fitaovana isan-karazany ny hery sivana.Ny sivana herinaratra EMI no vokatra lehibe indrindra, ampiasaina betsaka amin'ny rafitra herinaratra, rafitra herinaratra, rafitra fiovam-po matetika, rafitra nomerika, rafi-pifandraisana, fitaovana fitsaboana, fitaovana fitiliana, elektronika mpanjifa ary sehatra hafa.Io no safidy voalohany ho an'ny fifanarahana elektromagnetika (EMC).
Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana, manana mihoatra ny 3,000 metatra toradroa ny famokarana sy ny birao birao sy ny laboratoara manana ny zon'ny fananantsika manokana.Ny fitaovana fitiliana dia misy milina fitiliana sira, fitaovana fitiliana EMC, mpandinika tambajotra, miaraka amin'ny fitaovana insulation malefaka, fitiliana tetezana nomerika LCR Toy ny fitaovana isan-karazany, izany dia afaka miantoka ny kalitaon'ny akora sy ny vokatra vita amin'ny lafiny rehetra.Ny atrikasa famokarana dia ahitana atrikasa fanindronana plastika, atrikasa fametahana akorandriaka metaly, atrikasa famokarana sivana sy fivoriambe, atrikasa famenoana sivana, atrikasa fitsirihana sivana
2008: Niorina tao amin'ny Distrikan'i Xindu, Chengdu ny orinasa.
2009: Nahavita ny fisoratana anarana marika ny vokatra DOREXS ny orinasa.
2010: Nanao vohikala sy fampiroboroboana ny vokatra tamin'ny tranokala isan-karazany ao Shina ny orinasa.
2011: Nitombo hatrany ny zava-bitan'ny orinasa ary nanomboka nikasa ny hametraka asa maneran-tany.
2013: Ny marika orinasa DOREXS dia nahavita ny fisoratana anarana ny mari-pamantarana an'ny Vondrona Eoropeana, ny marika Madrid, ny marika amerikana ary ny toerana hafa.
2015: Ho an'ny fampandrosoana maharitra, nandany mihoatra ny 5 tapitrisa ny orinasa hividianana orinasa manokana misy 2.600 metatra toradroa ao amin'ny Jintang County, Chengdu.
2016: Ny orinasa dia nanangana ny sampan-draharahan'ny varotra amin'ny tsena any ivelany ary nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fikasana hanitarana ny fandraharahana iraisam-pirenena.
2017: Nifindra tamin'ny fomba ofisialy avy ao amin'ny Distrikan'i Chengdu Xindu ny orinasa ho any amin'ny atrikasa matihanina ao amin'ny Jintang Industrial Park, Chengdu, fanampiny, nanangana atrikasa fanindronana plastika vaovao, atrikasa akorandriaka metaly, ary laboratoara fitsapana EMC.
2018: Nivoatra haingana ny orinasa.Mba hametrahana ny fivoarana taty aoriana, nanangana ny ekipa R&D ary hanitarana ny ekipan'ny varotra, nandany 8 tapitrisa yuan mahery ny orinasa hividianana orinasa matihanina faharoa ao amin'ny tanànan'i Guanghan, Faritanin'i Sichuan.
2020: Rehefa mihamatanjaka ny fitaoman'ny orinasa dia tonga tao amin'ny orinasanay ny Sekretera Faritanin'i Sichuan niaraka tamin'ny ekipany mba hitari-dalana anay.